"हृदय भरी"मा पलसग रेखाको रोमान्स ! सुरु भयो छायांकन – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsKollywood“हृदय भरी”मा पलसग रेखाको रोमान्स ! सुरु भयो छायांकन
“हृदय भरी”मा पलसग रेखाको रोमान्स ! सुरु भयो छायांकन
March 30, 2019 Tulasa Karki Kollywood, News 0
चर्चित अभिनेता पल शाहको मुख्य अभिनय रहने फिल्म हृदय भरीको छायांकन सुरु भएको छ । सार्वजनिक खबरका अनुसार, उनले सो फिल्मको लागी करिब २० लाख पारिश्रमिक लिइएका छन ।
शुक्रबारबाट औपचारिक रुपमा छायांकन सुरु गरिएको फिल्मको छायांकनसंगै रिलिज डेट पनि तय गरिएको छ । फिल्म आगामी बैशाखबाट देशब्यापी रुपमा प्रर्द्शन हुने भएको छ ।
फिल्मलाई एन फिल्मस् एण्ड क्रिएशन , शाह प्रोडक्सन प्रा.लि र दिपीन्द्र फिल्मसको संयुक्त ब्यानरमा निकेश लिम्बु, चन्दन शाह तथा दिपीन्द्र राईले निर्माण गर्दैछन् । त्रिकोणात्मक प्रेम कथामा निर्माण हुने फिल्ममा सौरभ बिश्वास र रुचि बिश्वास सह निर्माताको रुपमा रहेका छन् भने प्रस्तुतकर्ता चन्दन शाह हुन् ।
फिल्ममा पलको अपोजीटमा रेखा लिम्बु रहने छिन । फिल्ममा यी दुईका अलावा नीर शाह, सुनिल थापा, काश बाबु, अनुराग कुवँर, निर्मल शर्मा, मनोज केसी, कविता रेग्मीलगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहने छ ।
घरमा सबैको फ्रेब्रेट हुदा पनि आफुलाई खराब श्रीमती बताउछिन प्रियंका, यस्तो छ कारण !